June 2015 ~ Myaylatt Daily.
Nay Myo Kyaw added3new photos.မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Ukyi Aungmdy and2others shared 7Day News Journal's post. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန်နှင့် လွှတ်တော်တွင်းမှ တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းထွက်ခွာပေးရန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ မှ ကျောင်းသား ၅၀ ခန့်က ယနေ့ (ဇွန်-၃၀ )တွင် ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ကြီးဈေးရှေ့ မှ ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမရှေ့သို့ ချီတက်လမ်းလျောက်၍ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သည် ။
သိမ်ကြီးဈေးရှေ့မှ ဆူးလေ သို့ချီတက်ရာလမ်းတစ်လျောက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးအင်အား ၂၀၀ ခန့်က သိမ်ကြီးဈေးရှေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၅လမ်းထိပ်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၈ လမ်းထိပ်တွင်တစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် လုံခြုံရေးစည်းတား၍ တားဆီးခဲ့ရာ ကျောင်းသားများ ကတိုးထွက် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမရှေ့သို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများ ရောက်ရှိလာပြီး ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ခွဲခန့်မှစ၍ ဟောပြောခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
Paukkalay Thayet added4new photos. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပါ ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်
အသံ ဆိုပြီး ပြည်သူက Fb. ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ပြတဲ့အခါ fbပါတာငါတို့နဲ့မဆိုင်
အပြုသဘောဝေဖန်တင်ပြတဲ့အခါ စီခန့်၊ စည်ပင်
ဒီနေ့ သိမ်ကြီးဈေးရှေ့ကနေ ဆူးလေ အထိ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ဖို့ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြတဲ့ ပွဲမှာ
Soe Ya added4new photos. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ဒီနေ့ သိမ်ကြီးဈေးရှေ့ကနေ ဆူးလေ အထိ
၄၃၆ ပြင်ဆင်ဖို့ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြတဲ့ ပွဲမှာ ကျွန်တော် ရိုက်လာတာလေးတွေပေါ့ ။
ဒီနေ့ပွဲက အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံကြားက နိုင်ငံရေးကစားကွက်အရွေ့တွေကို သတိထားစောင့်ကြည့် စရာအချက်အတွေအဖြစ်မြင်နိုင်ပြီး လွှတ်တော်ပြင်ပက လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုကို မြင့်တင်စေချင်တာလားလို့ စဉ်းစားမိတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ သက်လုံကောင်းအောင် ၀ိတ်ချထား မှဖြစ်မယ်ဆိုတာ လည်း ကျွန်တော့်ကို ဖိအားပေးနေတာဖြစ်တယ် ။ (ခြေထောက်တွေလည်း နာ ထီးတစ်ချောင်းလဲ ဆုံး ၊ ရုံးမှာ ထီးဖိုး ပြန်တင်လို့ ရမလားလို့ မေးလဲမေးချင်တယ် မေးလည်း မမေးရဲဘူး ) ။ လောလောဆယ်တော့ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး NLD နဲ့ ၈၈ ပေါင်းပြီး လက်မှတ်တွေ လိုက်စုနေတဲ့ အချိန်တုံးက ရေးထားခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို ဒီပုံတွေ နဲ့ တွဲပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ် ။ သည်းခံတော်မူကြပါကုန်တော် ခင်ဗျား ။
စိတ်နဲ့ လှမ်းပစ်လို့ ရတဲ့ အကွာအဝေးမှာ အကုသိုလ်တွေ ပုံထားတယ်
တနေ့ နည်းနည်း မနည်းမနော နောင်တတွေ တောင်လိုပုံ
မိုးလင်းတာ နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေမလာတာလဲ ဖွဲ့စည်းပုံ
မိုးလင်းက မိုးချုပ် ဘာပုံမှ မလာတာလဲ ဖွဲ့စည်းပုံ...မင်းတို့ အတည်ပေါက်နဲ့
ငါတို့ ဂုတ်ပေါ်တက်ခွထိုင်ထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ.....
ဗာရာဏသီပြည်မှာ အလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးရှိတယ်ကွဲ့ လဲ
ဖွဲ့စည်းပုံ မတုူတဲ့ ဘ၀တွေ
ဖွဲစည်းပုံ မတူတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ
ဖွဲ့စည်းပုံ မတုတဲ့ လူအဖြစ် မတ်မတ်ရပ် ရှင်သန်မှုတွေ
သစ္စာတရား ရှာတဲ့နေရာမှာ ငါ ဘုရားရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာလဲ လမ်းမဆုံးနဲ့တဲ့
နေစဉ်နှင့် အမျှ စပယ်ယာ ပါးစပ်ဖျားမှ လမ်းဆုံးနေရတဲ့ ခန္တိတရားတွေ
ဒီအနာဖေး နေ့တိုင်းခွာနေရတာဘဲ ဘ၀ဟာ တဖွဲဖွဲ မှောင်
နေတာကြာပေမယ့် နာတာတွေ မကျေသေးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ
ယုံခြင်း နှင့် မယုံခြင်းကြားမှာ လက်တလုံးခြား အဓမ္မပြုကျင့်သွားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ
လူသေပါးစပ်ထဲက တမတ်စေ့ နှိုက်ထုတ်သွားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ
စားပါသောက်ပါ စောင့်လျှောက်ပါ စောက်ပြသနာ မရှာပါနဲ့ ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ
လမ်းကြုံလို့ ၀င်လာတာ မဟုတ်ဘူး
လက်သီးနဲ့ မထိုးချင်လို့ ငါ လက်မှတ် ထိုးခဲ့တာ။...။
.မေ ၃၀ ၊၂၀၁၄
ITPEC (FE) စာမေးပွဲများဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် intensive training များကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှဇူလိုင်လ (6)ရက် နေ့မှ စတင်ကာ ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Mcpa Magway မှကူးယူဖော်ပြသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း IT ပညာဖွံ့တိုးတက်လာစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ IT နှင့်ပတ်သတ်သော စာမေးပွဲများကျင်းပပေး လျက်ရှိပါသည်။
IT ကိုစိတ်ပါဝင်စားသောလူငယ်များအတွက် Job Opportunities အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်မည့် နိုင်ငံ(၁၁)နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC (FE) စာမေးပွဲများဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် intensive training များကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ မကွေးတက္ကသိုလ် အနီး တက္ကသိုလ် လမ်းနှင့် တောင်တွင်းလမ်း ထောင့်ရှိကွန်ပျူတာအသင်းများရုံးခန်းတွင် ဇူလိုင်လ (6)ရက် နေ့မှ စတင်ကာ ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သရက် ဇွန် ၂၈
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂း၁၅) နာရီအချိန်ခန့်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ သရက်မြို့နယ်၊ မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ရဲစခန်း၌တာဝန်မှူးတာဝန် ဆောင်ရွက်နေစဉ် သရက်မြို့၊ ပြည်တော်အေးရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်းတွင် လူတစ်ဦးကြိုးဆွဲချ သေဆုံး နေကြောင်း ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရာဇာဦး၏ သတင်းပေးချက်အရ သက်သေများ နှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေး ရာ ပြည်တော်အေးရပ်ကွက်နေသူ ဆလိုင်းနိုင်ထွန်း (၅၀)နှစ်သည် အရက်အလွန် အကျွံ သောက်သူဖြစ်ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်ကာ ၄င်း၏ နေအိမ်အောက်ထပ် တမံသလင်းခင်း ဧည့်ခန်းရှိ အမြင့် ၆.၅ ပေခန့်ရှိ ထုတ်တန်းတွင် အရှည် ၂၀ ပေခန့်ရှိ အစိမ်းရောင် နိုင်လွန် ပလပ်စတစ်ကြိုးဖြင့် ကြိုးဆွဲချ သေဆုံးနေ သည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင် ရန် သရက်မြို့နယ်၊ မြို့မရဲစခန်း သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၅/၂၀၁၅ ဖြင့် အမှုရေးဖွင့်ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်း ညောင်ပင်အောက်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးနေ
တောင်တွင်း ဇွန် ၂၈
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေ (၄း၂၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး ခရိုင်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပိုးဇာခင်းကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက် (၁)ဖာလုံခန့်အကွာ ညောင်ပင် အောက် တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးနေကြောင်း ဆယ်အိမ်စုမှူး ဦးလှဟန်၏ ရွာဖုန်းဆက် အကြောင်းကြား ချက်အရ ဆတ်သွားနယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ သက်သေများ နှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေး ရာ သေဆုံးသူမှာ ပိုးဇာခင်းကျေးရွာနေ မဂွမ်းပုံ (၂၇)နှစ်ဖြစ်ပြီး ပက်လက်အနေအထားဖြင့် ပြင်ပဒဏ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရှိဘဲ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ ၄င်း၏ ယာဘက်ဘေးတွင် အရက်ဖြူများ ထည့် ထားသည့် (၄)ပုလင်းဆံ့ ပလပ်စတစ်ပုံး တစ်ပုံး ထောင်လျက် တွေ့ရှိပြီး သေဆုံးသူမှာ ယခင်ကလည်း အရက်အလွန်အကျွံ သောက်တတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏မိသားစုမှ ပြောပြသိရှိရသဖြင့် ဓမ္မတာအ တိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေး နိုင်ရန် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဆတ်သွားနယ်မြေရဲစခန်း သေ မှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၆/၂၀၁၅ ဖြင့် အမှုရေးဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြိုင်မြို့ -အမှတ်(၂)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာရေး
ခရိုင်-မြိုင် မြို့မ-၁ အခြေခံပညာ
င်း အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်ပွဲကို ဇွန် ၂၈ရက်နေ့
နံနက် ၉နာရီက ယင်းကျောင်းရှေ့၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲလင်းအောင်|
ပခုက္ကူခရိုင်-ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံး လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဟန်ဆင့်
က ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။
ထို့နောက် ဟောပြောပွဲ ဆက်လက်
ဦးကိုကိုလွင်တို့က အမှာစကား ပြောကြားပြီး|ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံး
ယနေ့နိုင်ငံတော်မှ ပညာရေး တိုးတက်
ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများကို အစဉ်တစိုက်
အဓိကထား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း
ပညာအရည်အချင်း ပြည့်ဝပြီး နိုင်ငံတကာ
မှသာ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးသော ပညာရည်ပြည့်ဝ
သည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်
မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
အမှတ်(၂)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသို့ အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြု အမိန့်စာ
ကို ခရိုင်လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ
ဆရာမကြီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မာအား ပေးအပ်ခြင်း
နှင့် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ဒေါ်ခင်မာဋ္ဌေးမှ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်
ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးမြင့်လွင်တို့
အား ကျောင်းဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အလံများ
ပေးအပ်ပြီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက
အမှတ်(၂)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့်
မှတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ကြသော မြိုင်မြို့နယ်တွင်
ထူးချွန်ဆု ပထမ ရရှိသော မဆွေဇင်ဦးအား
ကလည်းကောင်း| မြို့မ(၁) အ.ထ.က(ခွဲ)
တွင် ဒုတိယဆု ရရှိသော မဇင်လဲ့ဝါအား
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲလင်းအောင်က
လည်းကောင်း| တတိယဆု ရရှိသော
မသင်းယုခိုင်အား ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကလည်းကောင်း|တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်
ဦးခူခမ်းလ်မွန်နှင့်ရပ်မိရပ်ဖများကလည်းကောင်း အသီးသီးဆုများ ချီးမြှင့်ပေးကြပြီး
အခမ်းအနားကို နံနက် ၁၀နာရီ
၄၅မိနစ်တွင် ပြီးစီးကြောင်း သိရသည်။
ပန်းတိုင်းတော(အနောက်)ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်
အခြေခံပညာ အလွယ်တကူ ပညာ
(အနောက်)ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲကို ဇွန် ၂၈ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲက ယင်းကျောင်း
အဆိုပါဖွင့်ပွဲတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောဝင်း|
ဒုတိယဦးစီးမှူးဦးခိုင်မင်းထွန်းနှင့် ဒုတိယ
မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးကျော်သောင်းတို့က
အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း ဆိုင်းဘုတ်အား ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးကြ
ဦးကျော်ဆွေနှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူးတို့က
ဆက်လက်၍ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူး
က ကျေးရွာမိဘပြည်သူများနှင့်ဆရာ/ဆရာမများ ပူးပေါင်းပံ့ပိုး ကူညီဆောင်ရွက်မှု
အပေါ် မူတည်၍ မူလတန်း|အလယ်တန်း|
ဆရာကြီး ဦးသောင်းလှိုင် က ပညာ
သင်ကြားမှုနှင့် ယခုကျောင်းမှ အောင်မြင်
အနေဖြင့် ဋ္ဌာနအသီးသီးတွင် တိုင်းပြည်
အခြေခံပညာ အလယ်တန်း ကျောင်းအုပ်
ဆရာကြီး ဦးသန်းထိုက်မှ မြို့နယ်ဒုတိယ
ဦးစီးမှူးနှင့် မြို့နယ်ဒုတိယ ပညာရေးမှူး
ကို ပေးအပ်ပြီး ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်
တစ်ဦး က ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြား
၍ အခမ်းအနားကို နံနက် ၁၀နာရီခွဲတွင်
ပြီးစီးကာ မိဘပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသား
ကျောင်းသူများက ဒိုးပတ်|ပန်းပွါး အကများဖြင့် ဝမ်းသာစွာ တီးမှုတ်ကခုန်